चैत १५, काठमाण्डौ । गोकर्णेश्वर नगर कमिटिको आयोजनामा दोश्रो मुवाथाई राष्ट्रिय खेल सम्पन्न भएको छ । चैत १४ गते शनिबार गोकर्णेश्र मन्दिर परिसरमा उक्त खेल सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा गोकणेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी अतिथिहरुमा गोकर्णेश्वर नगर उपप्रमुख शान्ति नेपाल, सल्लाहकार दीपक रिसाल, अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक रमेश कुमार बोहोरा लगायतका रहनुभएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले पानसमा बत्ती गर्नुभएको थियो ।
मुवाथाइ खेल बिहान ११ बजेदेखि शुरु भएर दिउँसो ५ बजे सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा खेलक्षेत्रमा चासो राख्नै खेलप्रेमीहरुको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । प्रतियोगितामा देशभरका खेलाडीहरुको सहभागितामा रहेको थियो । प्रतियोगितामा १४ खेल समावेश गरिएको थियो । भने १८ जना खेलाडी सहभागी भएका थिए । त्यसमध्य २ जना महिला खेलाडी सहभागी भएका थिए ।
प्रतियोगितामा ५१ केजी मेडल फाइटमा तेजन मगर, तेन्जी शेर्पा, प्रविन राई र नवराज पराजुलीले हात पारे, ५१ के.जीको वेल्ट खेलमा अन्नन राई र लोप्साङ तामाङले जितेका छन् । त्यसैगरी ५४ के.जी ६० के.जी. ६३ के.जी. ६७ के.जी. ७२ के.जी मा क्रमश हेवी राई, सन्दीप तामाङ, दावाफुन्जो शेर्पा, अबरम राई, डिन विजय विक्रम राना, सन्तोष खत्री, कोशिस श्रेष्ठले वेल्ट जित्न सफल भएका छन् । महिला तर्फको ५१ के.जीमा देनिका राईले वेल्ड जित्न सफल भएकी छिन् ।
उक्त खेलका विजेता खेलाडीहरुलाइ प्रमखु अतिथि चालिसे लगायत उपप्रमुख शान्ति नेपाल सल्लाहकार दिपक रिसाल समेतले वेल्ट र मेडल वितरण गरेका थिए । कार्यक्रमको मिडिया पार्टनर अर्थ सवाल साप्ताहिक रहेको थियो । कार्यक्रममा म्याक्स मुवाँथाई क्लबका अध्यक्ष तथा प्रशिक्षक सानुकुमार श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्रिय मुवाथाई संघका प्रमुख प्रशिक्षक तथा अध्यक्षले अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक रमेश कुमार बोहोरा सह–सम्पादक योगेन्द्र चौलागाईं संवाददाता अंकध्वज मोते र रोशन ज्ञवालीलाई प्रशंसापत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो भने प्रतियोगिता सफल पार्न मिडिया क्षेत्रबाट अमूल्य सहयोग गरेको भन्दै अर्थसवाल साप्ताहिकका सम्पादक बोहोरालाई सम्मान गरिएको थियो ।
प्रतियोगिता समापन खेलका आयोजक अध्यक्ष सानु श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौंमा पनि नेकपाको गुट भेला सम्पन्न
सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता सम्पन्न दुवै पक्षबीच भयो ३ बुँदे सहमति
आजबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने